Donald Trump oo lasoo gole joojinayo & Xilka oo laga xayuubin karo! (Muxuu sameeyay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Donald Trump oo lasoo gole joojinayo & Xilka oo laga xayuubin karo!...
Donald Trump oo lasoo gole joojinayo & Xilka oo laga xayuubin karo! (Muxuu sameeyay?)
(Washington, DC) 25 Sebt 2019 – Afhayeenka Congress-ka Maraykanka Nancy Pelosi ayaa shaaca ka qaadday in ay si rasmi ah uu u billowday baaris horseedi kart xil ka-xayuubin oo lagu sameynayo Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Baarista ayaa la xiriirta eedo ku saabsan in Trump uu dowlado shisheeye inay gacan ka siiyaan doorashada sannadka 2020-ka, ayaga oo beegsanaya ninka ay u badan tahay inuu la loolamo ee dimqoraadiga ah, Joe Biden.
Previous articleHaddii aad isku aragto inaad markale HUBISO wax kasta oo aad samayso wax miyaa kaa KHALDAN?! (Ka faa’iidayso)
Next articleWARAR IS DHAAFSAN: Saxaafadda Kenya oo qoraysa war ka duwan waxa ku xusan heshiiska Somalia-Kenya